Timoteo Nhoma a Ɛto So Abien 3:1-17
Awiei mmere no mu no, mmere a emu yɛ den bɛba (1-7)
Di Paul nhwɛso akyi pɛpɛɛpɛ (8-13)
‘Nneɛma a wusuae no, kɔ so fa yɛ adwuma’ (14-17)
Kyerɛwnsɛm no nyinaa fi Onyankopɔn honhom mu (16)
3 Na hu eyi sɛ awiei mmere no+ mu no, mmere a emu yɛ den bɛba. 2 Efisɛ nnipa bɛyɛ pɛsɛmenkominya,* wɔbɛyɛ sikanibere, wɔbɛhoahoa wɔn ho, wɔbɛyɛ ahantan, wɔbɛkeka abususɛm, wɔrentie wɔn awofo asɛm, wɔbɛyɛ bonniayɛ, wobedi nkurɔfo huammɔ,* 3 wɔrennya tema, nkurɔfo rentumi ne wɔn nyɛ apam, wɔbɛsɛe nkurɔfo din, wɔrentumi nhyɛ wɔn ho so, wobedi atirimɔdensɛm,* wɔbɛyɛ wɔn a wɔmpɛ papa, 4 wobeyi nkurɔfo ama, wɔbɛyɛ asoɔden, wɔbɛyɛ ahomaso, sɛ́ anka wɔbɛdɔ Onyankopɔn no, anigye mmom na wɔbɛpɛ; 5 wuhu wɔn a wobɛka sɛ wɔsom Onyankopɔn, nanso wɔmmɔ wɔn bra sɛnea Onyankopɔn pɛ;*+ saa nnipa yi, twe wo ho fi wɔn ho. 6 Na wɔn mu binom bewiawia wɔn ho akɔ afi mu, na mmea a wɔyɛ mmerɛw a bɔne ahyɛ wɔn so na akɔnnɔ ahorow twetwe wɔn no, wɔbɛfa wɔn de wɔn ayɛ nkoa. 7 Wosua ade daa, nanso wontumi nnya nokware no ho nimdeɛ a edi mu no da. 8 Na sɛnea Yane ne Yambre ko tiaa Mose no, saa ara na saa nkurɔfo no nso ko tia nokware no. Wɔyɛ nnipa a wɔn adwene asɛe koraa, na Onyankopɔn nnye wɔn ntom wɔ gyidi no mu. 9 Na wɔrentumi nkɔ wɔn anim bio, efisɛ wɔn nkwaseasɛm bɛda adi pefee wɔ nnipa nyinaa anim, te sɛ nea ɛtoo saa mmarima baanu no.+ 10 Nanso wo de, nea woadi akyi pɛpɛɛpɛ ne me nkyerɛkyerɛ, m’abrabɔ,+ nea esi m’ani so, me gyidi, m’abotare, me dɔ, ne m’animia. 11 Bio nso, tan a nkurɔfo tan m’ani ne m’amanehunu, te sɛ nea ɛkɔɔ so wɔ Antiokia,+ Ikoniom,+ ne Listra+ no, wunim ne nyinaa. Mede animia gyinaa saa ateetee no ano, na Awurade gyee me fii ne nyinaa mu.+ 12 Nea ɛwom ne sɛ, wɔn a wɔpɛ sɛ wɔde onyamesom pa tena ase sɛ Kristo Yesu akyidifo nyinaa, nkurɔfo bɛtan wɔn ani.+ 13 Nanso nnipabɔnefo ne nnaadaafo bɛkɔ wɔn anim wɔ bɔne mu, wɔbɛdaadaa nkurɔfo na nkurɔfo nso adaadaa wɔn.+ 14 Na wo de, nea woasua na woagye adi sɛ ɛyɛ nokware no, kɔ so fa yɛ adwuma,+ efisɛ wunim wɔn a wusua fii wɔn nkyɛn, 15 na wo mmofraase+ na wusuaa nkyerɛwee kronkron no,+ na ɛno na ebetumi ama woahu nyansa afa Kristo Yesu mu gyidi so akɔ nkwagye mu.+ 16 Kyerɛwnsɛm no nyinaa fi Onyankopɔn honhom mu,+ na eye ma nkyerɛkyerɛ,+ kasakyerɛ, nneɛma ateɛteɛ, na ɛteɛ yɛn so ma yɛyɛ nea ɛteɛ,+ 17 sɛnea ɛbɛyɛ a Onyankopɔn nipa bɛfata paa a wɔasiesie no yiye ama adwuma pa biara.
^ Anaa “ahopɛ.”
^ Anaa “Onyankopɔn huammɔ.”
^ Anaa “wɔn ani so bɛyɛ krakra.”
^ Anaa “nanso wɔmfa tumi a ɛwɔ onyamesom mu no mmɔ wɔn bra.”